Waa Maxay Sababta Uu Marcus Rashford U Laadan Waayay Rikoodhada Uguna Daayay Anthony Martil Kulankii RB Leipzig. – Kooxda.com
HomePremier LeagueWaa Maxay Sababta Uu Marcus Rashford U Laadan Waayay Rikoodhada Uguna Daayay Anthony Martil Kulankii RB Leipzig.
October 29, 2020 Abdiwali Adan Jamac Premier League, Wararka Maanta 0
Xiddiga kooxda Man United ee Marcus Rashford ayaa sharfay xiddiga ay isku kooxda ahaayeen ee Romelu Lukaku markii uu Anthony Martial u ogolaaday rikoodhada in uu laagta kulankii ay United 5/0 uga badisay kooxda RB Leipzig.
Rashford ayaa kaydka ka soo kacay iyada oo kooxdiisu 1/0 ku hogaaminayso kooxda RB Leipzig kulan Old Trafford ka dhacay oo ka tirsanaa tartanka champions League waxana uu dhaliyay 2 gool oo deg-deg ah.
Si kasta ha ahaatee arinta ayaan halkaas ku joogsan waxana United lagu abaalmariyay rikoodhe kadib markii khalad lagu galay xiddiga Martial.
Rashford ayaa ladan karay si uu 13 daqiiqo gudihiis saddexley ku dhamaystiro laakiin xiddiga reer England ayaa rikoodhada u daayay Martial kaas oo gool u badalay.
Talaabada Rashford ayuu ka dambeeyay Lukaku gaar ahaan markii uu joogay kooxda Man United.
Rashford ayaa bilowgii bishan sheegay in uu xiddiga reer Belguim saddexley dhalin karay laakiin uu rikoodhadii ay United heshay daqiiqadii ugu dambaysay uu isaga u daayay kulankii PSG ee wareega 16-ka ee champions League.
“Aan kuu sheego Sheeko yar oo ku saabsan Romelu Lukaku”ayuu Rashford soo dhigay baraha bulshada.
“Waxa aan la ciyaaraynay PSG lugtii 2-aad ee wareega 16-ka champions League waxana aan lahayn rajo yar oo aan ugu soo bixi karno wareega xiga sababta oo ah 2/0 ayay PSG ku badisay Old Trafford lugtii hore”.
“Lukaku ayaa dhaliyay 2 gool waxa aan u baahnayn hal gool oo kale si aan u soo baxno waxana aan daqiiqadii 94-aad helnay Rikoodhe”.
“Lukaku ayaa kubada soo qaaday gacantana ii galiyay waxana uu ogaa in ay wakhtigaygii tahay”.
“Waxa uu ogaa in aan anigu noqon doono qofka la hadal hayn doono hadii aan dhaliyo rikoodhada wuuna ii ogolaaday”.
“Arintaas ayaa wxa aad u baahantahay kaaga sheegaysa Lukaku, xiddig aan bakhayl ahayn, xiddig kooxeed, oo aan marna ka daalin in uu dadka kale ka horaysiiyo naftiisa, waana arin aan ku qadariyo isaga”.
Intaa ka dib, 22 jirkaan ayaa ku adkeystay inuusan wax dhibaato ah ku qabin Martial inuu tuuro rigoorada.
“Waxa aan Anthony ku qabaa Kalsooni ah in uu laadan karo sidaas darteed wax dhibaato ah kuma qabin in uu laagto”.